Shandisa rako rako Hofisi Suite mugore neOngOffice | Kubva kuLinux
Shandisa rako rako Hofisi Suite mugore rine OnlyOffice
Gore riri mufashoni, isu tinozviziva, uye makambani makuru senge Microsoft, vari kuisa avo ekushandisa makuru kuti ashandiswe kubva kunetiweki. Munyika yeOffice otomatiki, pasina mubvunzo pane vatungamiriri vaviri vakuru: Google Docs neMicrosoft Office Online, asi ini ndangoziva kuburikidza Unixmen, imwe nzira nyowani yatinogona kuisa pane yedu yega server.
1 Chii chinonzi OnlyOffice?
2 Chii chinongopihwa neOffice chete?
3 Zvinodiwa pakuisa OnlyOffice
4 Kuisa iyo cheteOffice Online Edhita
Chii chinonzi OnlyOffice?
OnlyOffice ndeye yakavhurwa sosi yewebhu kunyorera iyo inotibvumidza isu kumisikidza yekubatana chikuva cheSMEs pane yedu pachedu server. Inosanganisira Enterprise uye Nharaunda vhezheni, uyezve, mune ino chinyorwa ini ndichakuudza maitiro ekuisa iyo yekupedzisira pane yedu pachedu server.
Chii chinongopihwa neOffice chete?
Document management- Inotibvumidza kugovana magwaro edu needu vatinoshanda navo nevashandisi vari kunze kweiyo portal, uye inosanganisira vhezheni yekudzora uye kudzokorora kuzere
Pamhepo gwaro mupepeti: Tinogona kugadzirisa akawanda-peji rechokwadi-nguva mishumo, zvemari kana bhizinesi zvinyorwa pamwe nevamwe vashandisi mune akawanda mafomati: PDF, TXT, DOCX, DOC, ODT, RTF, HTML, EPUB, XLS, XLSX, ODS, CSV, HTML, uye PPTX.
Mirairo manejimendi: Tinogona kushandisa milestones, mabasa uye mashoma emabasa ekuona zvakakosha pamberi pezvinangwa zvedu zvekutanga nezviitwa zvezuva nezuva. Tinogona kushandisa chati yeGantt kuti tione kufambira mberi kwedu mumabasa akasiyana siyana, tinogona kubata nguva yedu, pakati pezvimwe zvinhu.
CRM uye kubhadharisa: Tinogona kubata dhatabhesi nevatengi vedu, uye kugadzira invoice zvakananga papuratifomu.
Email muunganidzi: Tinogona kuwedzera yedu GMail account semuenzaniso, kuibatanidza nepuratifomu. Tinogona kuwedzera mail server tichishandisa redu rezita zita kuumba mabhokisi emakambani emakambani enhengo dzechikwata chedu, uye zvese izvi zvakabatanidzwa nemamwe ese maOffice mashandiro.
Zvinokugutsa here? Ngatione maitiro ekuiisa ipapo ..
Zvinodiwa pakuisa OnlyOffice
Kuisirwa kweOffOffice kwakaitwa pa Ubuntu Server 14.04 isina chero dura rewebhu yakaiswa. 2GB ye RAM, 2-core processor uye 40GB yediski nzvimbo inokurudzirwa.
Kana isu tichiisa OnlyOffice nenzira iyo yandicharatidza pazasi, iyo Community Server ichaiswa. izvo hazvi sanganisira iyo Online Mhariri. Kuisa iyo Online Mhariri, isu tinofanirwa kuwedzera mamwe maPPA andicharatidza gare gare, nekuti mapakeji ari muTrusty repository haachisiri echinyakare.
Kana isu takaisa Apache, nekuti isu tinofanirwa kuibvisa kana kuimisa, nekuti chikuva chinoshandisa Nginx.
$ sudo apt bvisa apache2
Ngatitangei. Isu tinovhura terminal ndokuisa:
$ sudo wget http://download.onlyoffice.com/repo/onlyoffice.key && sudo apt-kiyi inowedzera cheteoffice.key
Kana tapedza isu tinogadzirisa iyo faira /etc/apt/sources.list uye tinowedzera:
deb http://download.onlyoffice.com/repo/debian pwanya main
Iye zvino chasara chete kuita:
$ sudo apt kugadzirisa && sudo apt kuisa cheteoffice
Iyo yekumisikidza maitiro ichatanga, ichikumbira password yeMySQL. Kana yapedza tinokwanisa kuwana server yedu. Isu tinongofanirwa kuisa iyo IP kero mubrowser uye ichabuda chimwe chakadai.
Kana yapera, isu tinozobvunzwa kusarudza password, email (inoshanda) email kunyoresa account yedu, uye tinogona kusarudza mutauro wepuratifomu uye nenzvimbo yenguva:
Uye kana tapedza tichawana izvi:
Tinogona kutanga kushanda nekunakirwa nezvakanaka zvandakambotaura pakutanga kwenyaya, asi ndikati zvakare hatingave neInternet Edhita.
Kuisa iyo cheteOffice Online Edhita
Izvi zvinoitika nekuti kuti zvishande iwe unoda yepamusoro vhezheni yemono, mysql uye mamwe maraibhurari. Asi isu tinogona kuzvigadzirisa zviri nyore.
Kana uchigadzirisa nekuisa iyo Online Edhi hatizokwanise kuwana maturusi apfuura
Isu tinogadzirisa iyo faira /etc/apt/sources.list uye tinowedzera:
Ipapo isu tinoita:
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF $ echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main" | sudo tee /etc/apt/source.list.d/mono-xamarin.list $ sudo apt-tora kugadzirisa
Kana tangopedza tinonyora:
$ sudo apt kusimudzira && apt kuisa mysql-server-5.6 mysql-yakajairwa-5.6 mysql-mutengi-5.6
Kana zvese izvi zvaiswa, isu tinokwanisa kuwana iyo online mupepeti kuburikidza neiyo imwechete URL iyo yataishandisa kare.
Uye ndizvozvo .. 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Shandisa rako rako Hofisi Suite mugore rine OnlyOffice
Hazvidi kundipa matambudziko neLAMPP? : /
Ini ndinokukurudzira kuti uyedze sevha nyowani .. kana pasina kuwanda maitiro ..
Inotaridzika zvakanyanya kunaka!
rimwe zuva ndanga ndichinetseka kuti ndigoisa ino kana kwete. Asi ndine kusahadzika
Ino sisitimu inotora 40GB here? kana kuti imo nekuti unofanirwa kutora Mono…?
Zviri nyore kugadzirisa here? Ini ndatova neakaverengeka virtualhosts pane yangu server, uye ini handidi kuti kuisirwa kufuridza zvese kumusoro.
Zvakanaka, kana iri nzvimbo izvozvi ye40GB ini ndine 1.5Gb chete yashandiswa. Ini ndinofungidzira iyo nzvimbo ndeye kana mafaira atanga kuiswa uye zvichingodaro. Sezvo iro manejimendi manejimendi rine zvakawanda zvingasarudzwa, ini handizive kana zvakaringana pane izvo zvaunoda.
Akawanda emaharahosi pane imwechete sevha haisi tsika yakanaka, kudzivirira matambudziko eiyo dhizaini ndeyekuti kune kuona kana midziyo.
@mono, ndinoziva haisi tsika yakanaka. Asi zvese ndezvekushandisa zvega, uye sevha idambe, inomhanya paAtomu.
Ndinoziva kuti kana paine gomba rakakosha mune chero eanenge ari mahosthost vanogona kupedzisira vamomara vese, asi ini handisi kuzoshandisa mari yakawanda pane iri nani server, uye handisi kuzoparadza mashandiro nekumisikidza chaiwo michina kana LXC-mhando midziyo. Maatomu haape akawanda kwazvo.
Uye hapana peji rinopa sevhisi nepuratifomu iyi?
[Offtopic] xD Kana iwe ukatamba kupesana kwemhuri ini ndinokukoka iwe kumhuri ye linuxers inonzi! LinuxClan Join.
Ini ndinowana iyi kukanganisa pandinoedza kuisa yangu-sql 5.6
«Aya mapakeji anotevera ane unmet kutsamira:
mysql-server-5.6: Zvinoenderana: mysql-server-core-5.6 (= 5.6.19-0ubuntu0.14.04.1) asi haigadzike
zvinoita sekunge izvozvi kana iwe ukaisa. Tichaedza
Iyo yakaiswa, asi mushure mekuisa mysql 5.6, kuwana kwakarasika uye hakutakure chero chinhu zvachose.
Uye zvinoita here kuiisa uchishandisa MariaDB semaneja pane MySQL? Ndinoziva kuti MySQL yakadzika midzi nekuda kwekupararira kwedu seimwe nzira asi zvingave zvakanaka kana, kunyangwe tichishandisa hacks uye zvimwe zviitiko mukugadzirisa, MariaDB inogona kuiswa kwairi kuti uwane imwe nzvimbo; Kana zvisiri, saka hapana nzira
Ndinofungidzira zvakafanana chaizvo. Iwe waizongofanirwa kutumira kunze dhatabhesi, kuisa MariaDB uye kuendesa kunze .. mune dzidziso
Ndakaitora ndokuiisa pamusoro peCT mune proxmox ini ndakatevera nhanho dzese uye handina kana kumbowana iyo webhu edhita, ndiudze kana tichigona kuzviita pamwe chete kuti tione kana ichiburitsa iyo CT neHofisi yatove yakaiswa kusvika pakukwirira kwakawanda kwayo
Pindura kuna ArmandoF
Rafael Aguilar chinobata mufananidzo akadaro
Yakanaka post, mupiro mukuru chishandiso ichi.
Ndinoda kuziva kwawakawana iyo URL yeDebian repo, ndinoda kuziva kana paine imwe yeCentOS / RHEL 5 kana 6.
Kune mamwe ese, ndinofungidzira kuti mamwe matanho anoshanda, achichinja madhairekitori anodikanwa, handiti? chero zano?
Pindura kuna Rafael Aguilar
Mhoroi pane chero nzira yekuisa pane debian 7, ini ndinoedza asi zvinondiudza kusagutsikana kutsamira
Pindura kuna Pipo
Mhoroi, ndiri kutevera nhanho dzako asi mupepeti wepamhepo haashande, unogona kundibatsira
Kuisa iyo Online Edhisheni iri kure nezvose zvimwe .. iwe unofanirwa kungoita zvandinoisa muchikamu chekupedzisira ..
Vanhu vanoita zvakafanana nemurairidzi ane imwecheteyo server server, asi yekupedzisira nhanho ini ndinowana yekutsamira kukanganisa kukanganisa mysql-server-core-5.6 haina kuwanikwa, ini ndakatotarisa uye ndikagadzirisa uye hapana chinhu chisina kuwana iyo package.
Iko hakuna nzira nemupepeti:
- Ini ndinotanga kubva kwakachena kuiswa kweUbuntu Server 14.04.02
- Mune iyo yekuisa ini ndinoisa chete iyo SSH Server uye Mail Server mapakeji
- Ini ndinoteedzera iwo maitirwo etsamba. Kunyangwe pamberi pemupepeti, zvakanaka. Ini ndinopinda, kugadzirisa uye nezvimwe zvese.
- Nekutevera rairo yemupepeti. Paunenge uchiisa MySQL vhezheni 5.6 inosunungura iyo cheteOffice. Ok, ndinoisa zvakare uye:
apt-tora kuisa cheteoffice
Aya mapakeji anotevera ane unmet kutsamira:
cheteoffice: Zvinoenderana: mysql-server asi haizo gadza
apt-tora kuisa cheteoffice mysql-server mysql-mutengi
mysql-mutengi: Zvinoenderana: mysql-mutengi-5.5 asi haizo gadza
mysql-server: Zvinoenderana: mysql-server-5.5 asi haizo gadza
E: Matambudziko akatadza kugadziriswa, iwe wakachengeta mapaketi akaputswa.
Kubva pano zvichienda hazviite kuti ndiise OnlyOffice kana isiri neMySQL mushanduro 5.5.
Ini ndinofunga dambudziko nderekuti urikuisa:
Nekudaro, icho chaicho chinhu chakaitika kwandiri uye ndakanga ndisina nzira yekudzosera cheteoffice, ndaifanira kugadzira MV zvakare kubva pakutanga. Pamwe pane mhinduro, asi nekuda kwehusimbe handina kuiwana. Chinhu chekusvota nezve izvi ndechekuti kana iwe ukashandisa chinhu chimwe, kana iwe ukashandisa icho chimwe, zvese panguva imwechete zvisingaite.
Ehe ..., zvinoitika ndezvekuti kuisa izvo, neimwe nzira zvinondirongedza zvakanyanya neMySQL. Neimwe nzira zvigadziriso zvinhu zvinosara kubva mushanduro 5.6. Kunyanya pamwe neInnoDB theme, iyo isina kugadziriswa.
Kana zvikaitika kune mumwe munhu, ini ndakawana mhinduro pano:
Chero zvazvingaitika, neshanduro 5.5 mupepeti haushande.
Zvinoenderana neiyo peji uye maforamu http://dev.onlyoffice.org/ inokurudzira kuisa dura renharaunda (yekutanga), pane mumwe muchina uye (wechipiri) gwaro server pane mumwe muchina, yega yega inowanikwa munzvimbo dzekuchengetedza dzataurwa pano
Kune rimwe divi, ini ndinokurudzira kuti iwe ushandise docker yekumisikidza ese ari maviri masevhisi, zvakaoma pakutanga, asi wozowana iko hang yacho,
Pindura kune zvenguva pfupi
Mhoroi, ndatevera gwara rako .. uye ndakakwanisa kuiisa. Asi kana ini ndikaenda kunogadzira online edita uye ikandibvunza iyo email yekunditumira zita rekushandisa nephasiwedi, ini ndinopinda yangu email: acoguemovil@gmail.com uye hapana meseji inombosvika kwandiri….
Iyi yatove nyaya yekugadziriswa kwePostfix, kuti ikwanise kutumira mameseji kune internet. Chinhu chakajairika (uye chakareruka) ndechokuchiisa se "internet + smarthost". Kusvika ikoko:
dpkg-kugadzirisa zvakare postfix
Uye ipapo unofanirwa kumisikidza iyo yechokwadi yeaccount iyo inoshandiswa kutumira mameseji. Heano gwara:
Renato apaza akadaro
Mhoroi, kutanga kwekukorokotedza kwedzidziso, chechipiri, ini ndakatevera matanho ekumisikidza asi pandakatanga kunyorera meseji "502 Bad Gateway" inouya. Chero zano nei? ndatenda.
Pindura Renato Apaza
Zvakadii nezve ini ndakateedzera kuisirwa mu ubuntu asi zvinondipa kukanganisa kwekutendeseka kana zvese zvaiswa.
Ungabvarura sei odhiyo CD / DVD muLinux neRuzha Juicer
GNOME 3.16 inowanikwa